ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီ ဒုဥက္ကဌ ဦးကျော်ဇေယျ အမည် သုံး၍ သတင်းအမှား ဖြန့်ချိ – Nyang Media
ရဲဇော် / သတင်းအမှားတွင် အသုံးပြုထားသည့် ဓာတ်ပုံ
PPP ပါတီ ယခုအတိုင်း ဆက်သွားနေရပါက အမတ်တစ်နေရာ တောင် ရဖို့ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဦးကျော်ဇေယျ ဝေဖန်ပြောဆို တယ်ဆိုတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်အကြောင်း ပြောပြ လိုပါတယ်။
သည်သတင်းကို ရေးသားသူ နာမည် နေရာမှာ ငြိမ်းချမ်း လို့ ဖော်ပြ ထားပြီး ရဲဇော်အကောင့်ပိုင်ရှင်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် စာမျက် နှာ မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ရဲဇော်အကောင့်ပိုင်ရှင် ဖော်ပြထားတဲ့ သတင်းအမှား ကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးကျော်ဇေယျ မှ PPP ပါတီယ္ခုအတိုင်းဆက်သွားနေရပါက အမတ်တစ်နေရာတောင် ရဖို့မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဝေဖန်ပြောဆို
ဇူလိုင်(၂၀)က ပြုလုပ်တဲ့ ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီ၊ ဒဂုံမြို့နယ်ရုံးဖွင့်ပွဲ အပြီးမှာ ဦးကျော်ဇေယျ မှ အခုလိုပြောလိုက်တာပါ။
ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မဲ့ ပါတီအတွက် ကိုယ်စားလှယ် လောင်းတွေကို ဦးစားပေး နေရလို့ ယှဉ်ပြိုင် မယ့် မဲဆန္ဒ နယ်ကို တော့ဘယ်နယ်တွေဆိုပြီး မရွေးချယ်ရသေး ဘူး။ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးကနေ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း (၁၀၁)ဦး ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ရွေးချယ်ထားပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးအနေနဲ့ ကိုယ်စားလှယ် လောင်း ၂၅၀ နီးပါး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှာ ဖြစ်ပါ တယ်။
ရန်ကုန်က ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ အနက် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း က အမျိုးသမီးကိုယ်စားလှယ်တွေ ဘာမှ အတွေ့အကြုံမရှိ။ နောက်ကြောင်းလှန်ပြီး ကြည့်လိုက် တော့လည်း လိမ်လည်မှု့ ။မကောင်းသတင်းကျော်စောမှု့။ စစ်တပ်နဲ့ နွယ်နေတဲ့ လူတွေများပြားမှု့ ဟိုအမှု့ ဒီအမှု့ တွေနဲ့ အမှိုက်တွေလာစုတဲ့ပါတီဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်နေပြီ။
ဒီလိုပုံစံနဲ့ ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ရမလဲ. ?အမတ်တစ်နေရာကိုတောင် ဒီလူတွေနဲ့ဘယ်လိုမှ ရနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ ထောက်ခံ သူက နည်းပါးလွန်း။ ပါတီဝင်တွေကလည်း ဆန်ပေးလို့ ဆီရအနေအထားနဲ့ ပါတီဝင်ထားတဲ့ နှစ်ယောက်တစ်ပိုင်း အင်အားလေး။ ငွေကြေး စိုက်ထုတ်ပေးမယ့် ချမ်းသာသူတွေကိုလည်းမရှာနိုင် ။ ပါတီ ထောင်ရတာ သိပ်ပြီးခေါင်းရှုပ် ရတယ်လို့ ဦးကျော်ဇေယျက ဝေဖန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
× ရဲဇော် ??
ရဲဇော်ဖော်ပြချက်ကို မျှဝေသူ (၇၀၀) နီးပါး ရှိပြီး၊ မှတ်ချက်ပေးသူ (၃၀၀) နီးပါး နဲ့ React ပြုသူ (၁၄၀၀) နီးပါး ရှိပါတယ်။
ရဲဇော် အမည်ရ ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ” ဦးကျော်ဇေယျ မှ PPP ပါတီ ယ္ခုအတိုင်း ဆက်သွား နေရပါက အမတ် တစ်နေရာတောင် ရဖို့မဖြစ်နိုင်ကြောင်းဝေဖန်ပြောဆို” သတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီ (People’s Pioneer Party) ရဲ့ ဒုဥက္ကဌ ဖြစ်တဲ့ ဦးကျော်ဇေယျ ကို ဆက်သွယ်ပြီး သတင်း အမှား၊အမှန် အချက်အလက် စစ်ဆေးခဲ့ရာ သတင်းအမှား သာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီရဲ့ ဒုဥက္ကဌ ဦးကျော်ဇေယျက ငြမ်းမီဒီယာ ကို အတည်ပြုပြောကြားပါတယ်။
သတင်းအမှားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြိး ကျနော်ဆို ခဏခဏခံရပါ တယ်။မဟုတ်တဲ့သတင်းတွေ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေလည်း လုပ်တာပါပဲ …
“ ကျနော်က ဒုတိယဥက္ကဌ တာဝန်ရှိတဲ့သူ၊ ပါတီစည်းရုံးနေတာ အဲ့စကားမျိုးပြောပါ့မလား။ အမှန်တော့မလိုလားအပ်တဲ့ ဟာတွေ ပေါ့။ အမှန်က သတင်းမှန်ဖြစ်ရမှာ ” လို့ ဦးကျော်ဇေယျက ပြောပါတယ်။
ရဲဇော် အကောင့်က ဖော်ပြထားတဲ့ PPP ပါတီ သတင်းကို မိုးထက်အာကာ အမည်ရတဲ့ အကောင့်ပိုင်ရှင်က” နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မျိုးဆက်သစ်များ” လို့အမည်ရတဲ့ Public group ထဲမှာ ကူးယူ မျှဝေထားတာ ကို လည်း တွေ့ရပါတယ်။
သည်ဂရုထဲမှာ ကူးယူ ဖော်ပြမှုကို ပြန်လည်မျှဝေသူ (၂၅၀) နီးပါး ရှိပြီး၊ မှတ်ချက်ပေးသူ (၁၃၀) နီးပါး နဲ့ React ပြုသူ (၇၀၀) နီးပါး ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။
“ ကျနော် ပထမထင်လိုက်တာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တောင် သင်္ကာ မကင်းဖြစ်သွားမယ်။ ကိုယ့်ပါတီ ကိုယ်ကျော်စောအောင် ကိုယ့်ဟာကိုယ် လုပ်တယ်လို့တောင် ထင်မြင်သွားမှာတောင် ကျနော် စိုးရိမ်သွားပါတယ်။ အဲ့တာမျိုးတောင်ကျနော် တွေးပါ တယ်။ ဒါမျိုးက မဖြစ်သင့်ပါဘူး ” လို့ သတင်းအမှား ဖြန့်ချိနေမှု တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူ့ရဲ့ စိုးရိမ်မှုကို ဦးကျော်ဇေယျ က ဆိုပါတယ်။
ရဲဇော် အမည်ရတဲ့ အကောင့်ပိုင်ရှင်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်း ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဓာတ်ပုံပါ ကြေးမုံသတင်းစာ၊ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးသိန်းထွန်းဦး နာမည်နဲ့ ဓာတ်ပုံကို အသုံးပြုပြီး သတင်းအမှား တစ်ပုဒ် ဖြန်ချိခဲ့ပါသေးတယ်။
“ သတင်းအမှားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြိး ကျနော်ဆို ခဏခဏခံရပါ တယ်။မဟုတ်တဲ့သတင်းတွေ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေလည်း လုပ်တာပါပဲ” လို့ ဦးကျော်ဇေယျ က ငြမ်းမီဒီယာ ကို ပြောပါ တယ်။
ကျနော်တို့ပါတီကိုထောက်ခံပြီး သူများ ပါတီကို တိုက်တာကြတော့ သူမရိုးသားဘူးလို့ ထင်တယ်။ ကျနော်တို့ …
သတင်းအမှား ၊သတင်းတု တွေ ဖြန့်ချိနေတဲ့ ရဲဇော်ဆိုတဲ့ အကောင့်ပိုင်ရှင် ကို အရေးယူနိုင်တဲ့ အဆင့်ဖြစ်အောင် လုပ်ရတော့မယ့် သဘောဖြစ်နေတယ်လို့လည်း ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးသိန်းထွန်းဦးက သတိပေးထားပါတယ်။
“ တစ်ကယ်တမ်းက သမ္မတရုံးက ဦးဇော်ဌေးကိုယ်တိုင်ပြောတာပဲ။ စောင့်ကြည့်နေ တယ်။ ဒီကိစ္စတွေကို အရေးယူမယ် ပြတ်ပြတ် သားသားပြောတာပဲ။လက်ရှိ အာဏာရအစိုးရက တစ်ကယ်တမ်းသာ အကောင်အထည်ဖော်ချင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ရှိရင်လုပ်လို့ ရပါတယ်။ သူတို့က အပေါ်စီးကပါ ။အမှန်တရားဘက်က တစ်ကယ်တမ်း မှန်မှန်ကန်ကန်ရပ်တည်မယ်ဆိုရင် ဒါအကောင်အထည် ဖော်လို့ရပါတယ်” လို့ ဦးကျော်ဇေယျ က ဆိုပါတယ်။
“ သတင်းအမှား၊သတင်းအတုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အစိုးရရဲ့ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ပုံတွေဟာ အပြောတစ်မျိုး၊ အလုပ် တစ်မျိူးဖြစ်နေ တယ်” လို့ လည်း ဦးကျော်ဇေယျ က ပြောပါတယ်။
“ ဒီကိစ္စမှမဟုတ်ပါဘူး။ကျန်သောကိစ္စတွေလည်းဒီအတိုင်းပါ။ ပြောတာနဲ့လုပ်တာနဲ့က အကောင်အထည်ဖော်တာနဲ့က မတူဘူး ဖြစ်နေတယ်။ ဒီကိစ္စမှာလည်း ထိထိရောက်ရောက် သူက လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ အနေအထားမှာ ရောက်နေတယ်။ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိတဲ့ အနေအထားမှာ ပြည်သူတွေကလည်း ဒါမျှော်လင့်တယ်။ အားကိုးတကြီးနဲ့မျှော်လင့်ပြီး သားပါ။ဒါကို အကောင်အထည် ဖော်စေ ချင်ပါတယ်” လို့ ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီရဲ့ ဒုဥက္ကဌ ဦးကျော်ဇေယျက မှတ်ချက်ပြုပါတယ်။
ရဲဇော် အမည်ရ အကောင့်ပိုင်ရှင်ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြချက်တွေ အရ NLD ပါတီ ကို ထောက်ခံသူ လို့ ယူဆစရာ ရှိပါတယ်။
“ သူက ကျနော်တို့ပါတီကိုထောက်ခံတယ်။ ကျနော်တို့ပုံတွေ ဘာတွေ တင်တယ်။ အဲဒီ အခါကျတော့ ကျနော်တို့ပါတီကိုထောက်ခံပြီး သူများ ပါတီကို တိုက်တာကြတော့ သူမရိုးသားဘူးလို့ ထင်တယ်။ ကျနော်တို့ ပါတီကလူ ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မှာပေါ့။ တမင် ဒီဟာတွေ ပြပြီးတော့ ပါတီကို ထင်ယောင် ထင်မှား ဖြစ်အောင်လုပ်တယ် လို့ပဲ ထင် တယ်” လို့ NLD ပါတီ၊ ဗဟိုသတင်း ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ ၊အတွင်းရေးမှူး မုံရွာအောင်ရှင် က ငြမ်းမီဒီယာ ကို ပြောပါတယ်။
Tags: factcheck, PPP, နိုင်ငံရေး, ရွေးကောက်ပွဲ, သတင်းတု, သတင်းအမှား
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ကိုမောင်မောင်အေး ဓာတ်ပုံ ကို အသုံးပြုပြီး သတင်းအမှား ဖြန့်ချိ